सरकार र केसी पक्षबीच अाज (बुधबार)पनि वार्ता हुँदै | Nagarik News - Nepal Republic Media
सरकार र केसी पक्षबीच अाज (बुधबार)पनि वार्ता हुँदै
काठमाडाैं - अनसनरत डा. गोविन्द केसी तथा सरकारी वार्ता टाेलीबीच मंगलबार शुरू भएकाे वार्ता प्रक्रियाले आज (बुधबार) पनि निरन्तरता पाउने भएको छ।
अनशनको २५ औं दिनमा डा . केसी तथा सरकारी वार्ता टाेलीबीच पहिलोपटक मंगलबार वार्ता भएको थियो। संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने पूर्वशर्त छाडेपछि शुरु वार्ता कदम सकारात्मक भएतापनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि दुवै पक्ष जुटेका छन् । त्यसका लागि बुधबार बिहानबाट पुनः वार्तामा बस्ने सरकारी र केसी पक्षका वार्ता टोली संयोजकद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०७५ ०८:५८ बुधबार
सरकार केसी पक्षबीच अाज बुधबारपनि वार्ता हुँदै